I-Apple Ukuthatha Amanothi kusuka ku-Microsoft? | Martech Zone
Kubukeka njalo ngesonto ngilanda esinye isibuyekezo sesevisi seVista. Muva nje, iVista ibinePakethe Yesevisi ngosuku olufanayo lapho i-Apple ibuyekeze khona i-10.5.3 ye-OS X Leopard. Kusukela ukuvuselelwa kuLeopard, bengilokhu nginezinkinga eziningi ngisebenzisa isiphequluli… noma ngabe yiSafari noma yiFirefox.
Namuhla nginqume ukufaka kabusha iSafari ukuze ngibone ukuthi ngingakulungisa yini lokhu unomphela. Lapho ngiqala ukufakwa, ngahlangatshezwana nalokhu:
Ngakho-ke benze ukuthuthuka kepha bakudebeselela ukubuyekeza ukufakwa kwabo kwe-Safari ukuyivumela? O sithandwa se-Apple, mhlawumbe kufanele uhlale umncane. Okuxakayo ukuthi ngisebenzisa iFirefox ngokufana kule MacBookPro manje ukuntweza ngokushesha inetha.
Tags: amakhadi krisimasiezokuhweba ngekhompyuthai-infographic yeholideizinhlobo zeselulaamabhukumaka omphakathiamanani wokuguqulwa kwamathebulethiI-wordpress admin
Jun 3, 2008 ku-9: 51 PM
Ngibe nenkinga efanayo. Ngazise uma uthola ukulungiswa kwakho!
Akunakusho ukuthi, ngisebenzise i-pc yami kakhulu muva nje. Ngisebenzise kuphela iMac ukuthi ilungele ini noma kunjalo… ngezinhloso zokwakha.
Jun 4, 2008 ku-9: 21 PM
Ngithole isicelo esisodwa esibonakala siphikisana futhi yilokho U-Orbicule's Undercover. Ngabhala ukwesekwa kwabo futhi ngasusa ngokuphelele isicelo futhi kubukeka sengathi ngenza kangcono. Kubi kakhulu, ngiyakuthanda ukuphepha okunikezwa uhlelo lwabo lokusebenza. Ngabacela ukuthi bangibhalele uma sebekulungisile lokhu.
Ngicabanga ukuthi kungenzeka kube ezinye izingqinamba, kepha lokhu bekuyikho okukhulu.